IBibelkring: “Iqela Labafundi BeBhayibhile”
NGASEKUPHELENI koo-1930, eLake Toba ekuMntla weSumatra kwasekwa iqela iBibelkring (igama lesiDatshi elithetha “iqela labafundi beBhayibhile”). Eli qela laqala emva kokuba ootitshala abaninzi bamkela iincwadi zeBhayibhile kuvulindlela owayeshumayela eLake Toba ngo-1936, ekusenokwenzeka ukuba nguEric Ewins. Oko bakufundayo kwabenza bayishiya iCawa yamaProtestanti eseBatak baza badibana emakhayeni njengamaqela. Loo maqela akhula de anamalungu amaninzi. *
Udade Limeria Nadap-Dap owayelilungu leBibelkring, ngoku ngumKristu
Lincedwa ziincwadi ezazishiywe nguvulindlela, iqela lamaBibelkring lafunda iinyaniso zeBhayibhile ezininzi. UDame Simbolon owayeyilungu leli qela waza kamva wafumana inyaniso ngo-1972, uthi: “Lalingavumi ukukhahlela iflegi nokubhiyozela iKrismesi nemihla yokuzalwa, kanti abanye kulo babeshumayela nakwindlu ngendlu.” Ngenxa yokungafumani nkxaso kwintlangano kaThixo, bakholelwa baza benza izinto ezazithethwa ngabantu. Udade Limeria Nadap-Dap, owayelilungu leli qela uthi: “Amabhinqa ayengavunyelwa ukuba azihombise, anxibe izacholo, anxibe iimpahla zaloo maxesha nkqu nezihlangu. Amalungu ayengavunyelwa ukufumana isazisi, nto leyo eyacaphukisa urhulumente.”
Ekugqibeleni eli qela laqhekeka langamahlelo amaninzi aza nawo aya ephela. Xa oovulindlela babuyela eLake Toba, abaninzi bamkela inyaniso.
^ isiqe. 1 Eminye imithombo iqikelela ukuba ayengamawaka amalungu eBibelkring.